Esi ọcha Broken Uzo mkpirisi na Windows
> Resource> Ihichapu> esi ọcha Broken Uzo mkpirisi na Windows
Kasị omume ga-mepụta mkpịrịsị ụzọ mgbe wụnye, n'ihi na mma nke ojiji. Ma, mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ghara wepụrụ mgbe iwepụ na omume, ma na-ghara ịdị irè ma ọ bụ agbajikwa mkpirisi ụzọ. Ghara ịdị irè mkpirisi bụ nwa mgbei faịlụ hapụrụ n'oge omume uninstallation na faịlụ / nchekwa nhichapụ. Ha na-gbasasịa ke Desktọpụ, Startmenu na ihe ọ bụla nkuku nke gị usoro. Ndị a junk mkpirisi ga gị n'iyi disk na usoro akụ. Mgbe ahụ, olee otú anyị pụrụ ewepụ ndị ghara ịdị irè mkpirisi?
Ọ bụghị otú ahụ ike dị ka i chere ọcha gbajiri mkpirisi na Windows, wee na-gị uwe elu on. Niile ị chọrọ bụ naanị a shortcut Cleaner. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu, ebe a bụ m nkwanye: Wondershare WinSuite 2012. Nke a gbajiri shortcut Cleaner nwere ike inyere-ewepụ ihe niile ghara ịdị irè mkpirisi gbasasịa ke gị na Desktọpụ, Startmenu na n'ebe ọ bụla nke gị usoro. Ị nwere ike ịchọta ma hichaa ha niile na otu Pịa.
Step1. Gbaa ndị shortcut Cleaner software
Mgbe wụnye usoro ihe omume, na-agba ya na kọmputa gị. Pịa "Lelee & TuneUp" n'elu na-aga "shortcut Cleaner" na n'aka ekpe menu n'okpuru "Windows nzacha na mkpocha", wee pịa "shortcut Cleaner", na green bọtịnụ na center ime na.
Step2. Malite ịgụ isiokwu gị na kọmputa
Ọzọ, pịa "Malite iṅomi" ịchọpụta ma chọta gbajiri mkpirisi na kọmputa gị.
Step3. Ọcha gbajiri Ụzọ mkpirisi
Mgbe a sekọnd ole na ole, ndị niile gbajiri mkpirisi na gị usoro ga-hụrụ ma e depụtara dị ka ndị na. Akara ha niile na pịa "Clean Up" wepụ ghara ịdị irè mkpirisi ụzọ.
Ke adianade do, a usoro ka nwere nza nke ọrụ ka ị ego na tuneup kọmputa gị, nakwa dị ka jikwaa nzuzo gị, okwuntughe na disk partitions, ọbụna naghachi furu efu data.
Olee otú iwepụ Mmemme Ị Pụghị Wepụ
Nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu ka ihichapụ malwares / nje na kọmputa gị
Top 5 Free Antivirus ọcha virus na gunpoder si gam akporo ekwentị
Esi ọcha égwu 'Data site na iPhone
4 ụzọ ka ihichapụ ekpochi faịlụ
Olee otú adịgide adịgide Ihichapu Data on iPad
Olee otú Easily Wepụ oyiri Songs Gị Big Music Library